Dhammaystirka Heshiiska Shatiga Isticmaalaha - Liiska Faylka Fudud
Heshiiska Shatiga Isticmaalida
Tani waa heshiis u dhexeeya Licensor (Qaybta Hawlgalka, LLC) iyo Ruqsad haysta, oo rukhsad loo siinayo inuu isticmaalo Software-ka la magacaabay; Liiska Faylka Fudud Pro, oo ay kujirto Baadhis & Baadhis ikhtiyaari ah iyo / ama fidinta softiweerka Maareeyaha Helitaanka Faylka
Shati-bixiyuhu wuxuu qirayaa in tani ay tahay uun shati aan xaddidnayn oo xaddidan. Ruqsad siiyaha ayaa wali ah milkiilaha dhamaan cinwaannada, xuquuqda, iyo danaha Software-ka.
Ruqsadani waxay u fasaxaysaa rukhsad si uu ugu rakibo barnaamijka kaliya barta internetka oo ka diiwaangashan Element Engage, LLC. Shati-bixiyuhu ma sameyn doono nuqullada Barnaamijka ama uma oggolaanayo nuqulada Barnaamijka inay sameeyaan dad kale, illaa uu oggolaado Heshiiskan Shatiga. Ruqsad-bixiyuhu wuxuu samayn karaa nuqulo ka mid ah Software-ka ujeeddooyin keli ah.
Software-kani wuxuu ku xiran yahay dammaanad xadidan. Ruqsad-bixiyuhu wuxuu rukhsad u siinayaa Ruqsadda in qalabka dijitaalka ah ee softiweerkan lagu qaybiyay uu ka madax-bannaan yahay cilladaha qalabka iyo shaqada sida caadiga ah loo adeegsado, Software-ku wuxuu ku fulin doonaa sida ku cad dukumiintiyadiisa daabacan, iyo tan ugu wanaagsan ee rukhsadda uu u adeegsado Shatiga Shatiga u adeegsado barnaamijkan sida ku cad dukumiintiyada la daabacay ma ahan xadgudub xuquuqda qofeed ee dhanka hantida aqooneed ee dhinac saddexaad. Dammaanadani xaddidan waxay socotaa muddo ah 30 maalmood dhalmada ka dib. Ilaa inta sharcigu oggol yahay, DIYAARINTA XADDIDAN EE DUWAN EE SAMAYSAN AYAA BADALAYA DHAMMAAN DAMNIYADO KALE, MUUQAAL AMA LOO SHAQEEYAY, IYO LAYSANSIGU WUXUU SAMAYNAYAA DHAMMAAN DARSIYADAHA LAGU SHAQEEYEY OO AY KU JIRAAN QOF KASTA OO LOOGU TALAGALAY SHAQO, LACAG LA'AAN, AAN LAHAYN. Ma jiro wakiilka shatiyeyaasha loo fasaxay inay sameeyaan damaanad qaadyo kale ama inay wax ka beddelaan damaanad-qaadkan xaddidan. Tallaabo kasta oo lagu jabinayo damaanadkan xaddidan waa in lagu bilaabaa hal sano gudahood markuu dhacayo damaanadda. Sababtoo ah awoodaha qaarkood ma oggola xaddidaadda dhererka damaanad la soo sheegay, xaddidaadda kor ku xusan laguma dabaqi karo Liisankaan. Haddii sharcigu oggolaan waayo afeefidda dammaanadaha la soo qaatay, markaa dammaanad kasta oo la soo koobo waxay ku egtahay 30 maalmood ka dib marka loo dhiibo softiweerka rukhsadda. Shati-bixiyuhu wuxuu leeyahay xuquuqo sharciyeed oo gaar ah sida waafaqsan damaanad-qaadkan, waxayna kuxirantahay awooda shatiga, wuxuu yeelan karaa xuquuq dheeri ah.
Haddii ay dhacdo jebinta Dammaanadda Xaddidan, daaweynta khaaska ah ee Shatiyuhu waa sida soo socota: Shati-bixiyuhu wuxuu baabi'in doonaa dhammaan nuqulada Barnaamijka ee loo yaqaan 'Licensor', oo ah qiimaha shatiga, iyo caddaynta iibsiga. (Shati siiyaha ayaa ku heli kara sharraxaad tallaabo-tallaabo ah ee nidaamkan isagoo la xiriiraya shati-siiyaha at [emailka waa la ilaaliyay]) Ikhtiyaarka shati-siiyaha, shati-bixiyuhu wuxuu sidoo kale u diri doonaa rukhsad nuqul beddelka ah ee softiweerka, kharashka shati-bixiyaha, ama wuxuu soo saari doonaa lacag celin buuxda.
Si kasta oo ay yihiin kuwa kor ku xusan, LIISBIILIYAYAASHU LAMA QAADO INAY LAYSHSADSATO WAXYAABAHA LOOGU TALAGALAY, OO AY KA MID YAHAY SHAQAALO, GAAR AH, SHARCIGA AH, SHARCIYADA, AMA KHARASHADA LOOGU TALAGALAY LACAGTAN LIISKAAN.
Shati-bixiyuhu wuxuu oggol yahay inuu difaaco oo uu sharciyeeyo shati-bixiyaha oo uu haysto shati-laawe waxyeello u lahayn dhammaan sheegashooyinka, khasaaraha, waxyeellooyinka, cabashooyinka, ama kharashyada la xiriira ama ka dhasha howlaha ganacsi ee shati-siinta
Ruqsad-bixiyuhu wuxuu xaq u leeyahay inuu joojiyo Heshiiskan Shatiga iyo rukhsadda uu u leeyahay inuu adeegsado softiweerkan wax kasta oo jebiya shatiga.
Shati-bixiyuhu wuxuu oggol yahay inuu ku laabto shati-siiyaha ama inuu baabi'iyo dhammaan nuqullada barnaamijka 'Software' marka la joojiyo Shatiga.
Heshiiskan Liisanka ayaa ah dhammaan heshiis gaar ah oo u dhexeeya Ruqsad-siiyaha iyo Ruqsadda ku saabsan barnaamijkan. Heshiiskan Liisanka ayaa beddelaya oo beddelaya dhammaan wada-xaajoodyadii hore, macaamilkii, iyo heshiisyadii u dhexeeyey Ruqsad-siiyaha iyo Liisanka ku saabsan Software-kan.
Heshiiskan Shatiga waxaa xukuma sharciga Minnesota ee khuseeya qandaraasyada Minnesota.
Heshiiskan Shatiga ayaa ansax ah iyada oo aan lasixin shati-siiyaha. Waxay wax ku ool noqoneysaa markii hore ee diiwaangelinta Shatiga ama Isticmaalka Shatiga ee Software-ka.